Punta Cana - Waxyaabaha muhiimka ah ee la sameeyo oo la arko | Safarka Absolut
Waxyaabaha muhiimka ah ee la sameeyo oo lagu arko safarkaaga Punta Cana
Susana godoy | | Jamhuuriyadda Dominican
Baahnayn in la yiraahdo, Punta Cana waa mid ka mid ah meelaha ugu baahida badan. Sababtoo ah kaliya in aan sheegno magaceeda, waxaan ogaanay in xeebaha ay yihiin jannada ay raadinayaan inta badan dalxiisayaasha, laakiin waa run in marka lagu daro ku raaxaysiga geesaha qorraxda, ciidda iyo biyaha turquoise. Safarka Punta Kana waxa uu nooga tagayaa waxyaalo aan dhamaad lahayn oo aan samayno oo aan aragno.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay fikradda Ku raaxayso qaar ka mid ah xeebaheeda xiisaha leh, dabcan waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah fasaxyada Punta Cana. Laakiin maadaama aad ku raaxaysanayso maalmo fasax ah, waxaad haysataa doorashooyin kale oo aad sidoo kale jeclaan doonto. Haddii aanad garanayn meel aad wax ka bilowdo, ha werwerin, shaqada waanu kuu qabannay. Kahor intaadan si buuxda u damin, xasuusnoow inaad doorato a diyaarad lagu daray hotel Punta Kana. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waxaad raaci doontaa amniga iyo raaxada in wax walba si fiican loo xiro ama loo xiro. Hadda haa, ku soo dhawoow ama ku soo dhawoow fasaxaaga!
1 Ku abaabul safarkaaga Punta Kana xirmo fasax loo dhan yahay
2 Dalxiiskii ugu horreeyay ee lagu taliyay: Beerta Qaranka ee Los Haitises
3 Booqashada Isla Saona
4 Quusidda Jasiiradda Catalina
5 Santo Domingo, booqashada ugu dhaqanka badan
6 Hawlaha ugu fiican ee aad ku tababaran karto Punta Cana
Ku abaabul safarkaaga Punta Kana xirmo fasax loo dhan yahay
Talaabada ugu horeysa si aad ugu raaxaysato naftaada in ka badan waligeed waa inaad doorato fasax loo dhan yahay Punta Cana. Sababtoo ah markaas kaliya ayaan ogaan karnaa inaan haysano nidaamka hoyga oo ay ku jiraan dhammaan adeegyada. Markaa habkan, waxa kaliya oo aad u baahan doontaa inaad diirada saarto inaad ku raaxaysato dhammaan dhaqdhaqaaqyada aadka kuu xiiseeya oo aad u ogolaato naftaada si xawli badan leh, adigoon ka werwerin meesha aad wax ka cunto iyo goorta. Dabcan, xaaladaha kale Marka laga hadlayo hoteelada Punta Cana, waa inaan xusnaa raaxada weyn ee aan ka heli doono iyaga. Taas macnaheedu waa in ay jiri doonaan maalmo aanad u baahnayn inaad baxdo, sababtoo ah waxaad heli doontaa wax kasta oo aad dooneysey.
Dabcan, marka la samaynayo boos celinta hudheelka, waa inaan sidoo kale ka fekernaa mid kale oo ka mid ah fursadaha ugu baahida badan ee diiradda saaraya duulimaadka iyo hoteelka Punta Cana. Fikrad qumman sababtoo ah waxaan sidoo kale xiri doonaa laba ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ka hor inta aan safarka ka bixin. Sidan, waxaan ku heli karnaa dalabyo mar walba la soo dhaweyn doono.
Dalxiiskii ugu horreeyay ee lagu taliyay: Beerta Qaranka ee Los Haitises
Waxaan horey u sameynay boos celin safarkeena Punta Kana, marka marka aan degno, tacabirka ayaa bilaabmaya. Tacabur ka bilaabma mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee la booqdo. Tani waa Beerta Qaranka ee ku taal Bay of Samaná. Waxaad ku raaxaysan doontaa aag ka fog dhammaan goobaha nasashada ee aagga. Waxa aad ka heli doontaa waxa loo yaqaan 'mogotes' oo ah nooc ka mid ah meelaha sare ama dhulalka sare ee la sameeyay. Waxaad ku iman kartaa badda oo aad ogaan kartaa godad kala duwan oo ay ku yaalliin meelahan oo kale, oo ay ka buuxaan siraha laakiin aad u qurux badan.
Booqashada Isla Saona
Waa mid ka mid ah dalxiisyada loogu baahan yahay sababta oo ah waxay leedahay xeebo qurux badan oo ay ka buuxaan geedo timireed, laakiin ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale waxaa weheliya xeebaha korantada. Waa lama huraan in huteelada Punta Cana lagu daro xirmooyinkooda ugu badan ee lagu taliyey ama waqtiyada firaaqada. Halkaas waxaad ka heli doontaa Mano Juan, oo ah tuulo kalluumeysi oo aad u deggan., taas oo ku guulaysan doonta, iyada oo ay ugu wacan tahay qolalkeeda midabada leh iyo sida aad u noqotey hoyga qoolleyda.
Quusidda Jasiiradda Catalina
Jasiiradaha kale ee aad sidoo kale booqan karto waa kan. Waxaa loo magacaabay Catalina sababtoo ah taasi waa sida uu Christopher Columbus u magacaabay magaceeda 1494. Waa meel kale oo ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan waxaana dhexdeeda aad ku qaadi kartaa dhaqdhaqaaqyo ay ka mid yihiin quusitaanka. Had iyo jeer waa wax caadi ah meelaha caanka ah sida. Markaa, ka dib socodka jasiiradda, ma jiraan wax la mid ah doorashada jimicsi yar. Waxaad ku dhici doontaa jacayl leh aragtidiisa oo ka buuxa dabeecadda.
Santo Domingo, booqashada ugu dhaqanka badan
Haddii hal maalin aad goor hore kacdo oo aad rabto inaad sameyso safar dhaqameed, ma jiraan wax la mid ah inaad aado Santo Domingo. Laga soo bilaabo Punta Kana waxay ku dhowdahay saddex saacadood baabuur. Laakiin waxay noqon doontaa mid u qalantaa, iyo wax badan. Maadaama ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn Caribbean oo dhan. Waxay leedahay xarun taariikhi ah oo gidaar ah iyo sidoo kale dhismayaal laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Sidoo kale meeshan waxaad ku raaxeysan kartaa cathedral-ka ugu horreeya iyo qalcadda ee Ameerika lahaa. La yaab ma leh inay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka
Hawlaha ugu fiican ee aad ku tababaran karto Punta Cana
Meel kasta oo xeebta ah, oo ah kuwa ugu badan ee aan horay u soo sheegnay, mar walba ma ahaan doontid kuwo qorrax leh ama maydhsan. Markaa waxaad wakhti gelin kartaa hawlaha gaarka ah ee ugu badan. Waxaan soo sheegnay quusitaanka laakiin Sidoo kale ma iloobin in aan ku dhex marno meelo bacaad ah oo ku yaal afargees ama fardo. Maxaad jeclaan lahayd in ka badan? Waxaa laga yaabaa inaad awood u leedahay inaad ku duusho aagga ama aad ku tababarato surfing. Shaki la'aan, waxaa jira doorashooyin mid kasta iyo mid kasta oo dhadhanka ah. Ku sharad fasax riyo ah hana ka werwerin jeebkaaga sababtoo ah duulimaadka Punta Kana iyo hudheelka ayaa wada tagi kara, baakidh oo ku badbaadiya qanjaruufo wanaagsan. Ma xirxiraneynaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxyaabaha muhiimka ah ee la sameeyo oo lagu arko safarkaaga Punta Cana